၂၀၁၉ ခုနှဈရဲ့ အကြျောကွားဆုံးအဆိုတျော။ – SoShwe
Home/Entertainment/၂၀၁၉ ခုနှဈရဲ့ အကြျောကွားဆုံးအဆိုတျော။
၂၀၁၉ ခုနှဈရဲ့ အကြျောကွားဆုံးအဆိုတျော။
So Shwe May 29, 2020	Entertainment Leaveacomment
ဟောလီဝုဒျအနုပညာလောကထဲကိုရောကျတာမှ သိပျမကွာသေးပမေယျ့ အောငျမွငျမှုတှေ တဈသီတဈတနျးကွီး ရရှိနပွေီဖွဈတဲ့ အသကျ ၁၈ နှဈအရှယျ Billie Eilish ဟာ ဟောလီဝုဒျဝါရငျ့အဆိုတျောတှရေဲ့ အောငျမွငျမှုကို အမှီလိုကျနိုငျလာသူပဲဖွဈပါတယျ။ ၂၀၁၉ ခုနှဈ Global Digital Singles Chart ရဲ့ ပထမနရောမှာ “Bad Guy” သီခငျြးနဲ့ Billie Eilish ကဦးဆောငျနခေဲ့ပွီး ဒုတိယနရောကိုတော့ “Old Town Road” သီခငျြးနဲ့ Lil Nas X က ရရှိခဲ့ပါတယျ။
ဆယျကြျောသကျအရှယျသာရှိသေးတဲ့ Billie Eilish ကို ဆယျကြျောသကျအရှယျလေးတှအေပွငျ အသကျ ၂၀ ကြျော၊ ၃၀ ကြျောတှကေလညျး သဘောကအြားပေးကွပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ဟောလီဝုဒျအနုပညာအသိုငျးအဝိုငျးက အနုပညာရှငျတဈခြို့ဟာလညျး Billie Eilish ရဲ့ အမာခံပရိသတျတှေ ဖွဈကွပါတယျ။ Billie Eilish လေးကို လူတှကေ သဲသဲလှုပျခဈြကွတာက သူ့ရဲ့သီခငျြးကွောငျ့လား ? ဒါမှမဟုတျ သူ့ရဲ့စတိုငျကွောငျ့လား ? အမှနျတကယျတော့ ၂ခုလုံးကွောငျ့ပါပဲ။
Billie Eilishလေးဟာ စကားကို ပှငျ့လငျးစှာပွောတတျပွီး ပြျောပြျောနတေတျတဲ့ သာမနျဆယျကြျောသကျအရှယျ ကောငျမလေးတဈယောကျပဲ ဖွဈပါတယျ။ Billie လေးရဲ့ ဖကျရှငျကိုကွညျ့မယျဆိုရငျတော့ သူမဟာ သူ့ရဲ့ခန်ဓာကိုယျကောကျကွောငျးအလှကို ဖုံးကှယျထားလိုတာကွောငျ့ အမွဲတမျး အကငြ်္ီပှပှ ဘောငျးဘီပှပှတှဝေတျထားတတျပါတယျ။ အဲ့ဒီအခကျြကပဲ အခွားအနုပညာရှငျအမြိုးသမီးတှနေဲ့ ကှာခွားတဲ့အခကျြဖွဈနပွေီး အကငြ်္ီပှပှ၊ ဘောငျးဘီပှပှဝတျထားတာတောငျမှ ခဈြစရာကောငျးနပွေနျပါတယျ။
Billie ရဲ့ သီခငျြးအမြားစုကို နားထောငျကွညျ့မယျဆိုရငျ အနညျးငယျ ခွောကျခွားစရာကောငျးသလို မွူးမွူးကွှကွှ ပုံစံမြိုးလညျးဖွဈပါတယျ။ ဆယျကြျောသကျအရှယျသာရှိသေးတဲ့ Billie Eilish လေးဟာ အခွားသောဆယျကြျောသကျအရှယျတှေ ခံစားရလရှေိ့တဲ့ မသခြောမရရောတဲ့ခံစားခကျြတှကေို ခံစားရလရှေိ့ကွောငျးကို သူ့ရဲ့သီခငျြးတှကေို နားထောငျကွညျ့ရုံနဲ့ တနျးသိနိုငျပါတယျ။
Billie Eilish ရဲ့ “Bad Guy” သီခငျြးဟာ နိုငျငံတဈဝှမျးက နိုငျငံ ၁၅ နိုငျငံရဲ့ ဂီတစာရငျးမှာ လူကွိုကျအမြားဆုံးသီခငျြးအဖွဈ ထိပျဆုံးကနရေပျတညျနခေဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ ၂၀၂၀ ခုနှဈ ဇနျနဝါရီလမှာ ကငျြးပခဲ့တဲ့ ၆၂ ကွိမျမွောကျ Grammy ဆုပေးပှဲမှာလညျး Billie Eilish ရဲ့ “Bad Guy” သီခငျြးဟာ တဈနှဈတာအကောငျးဆုံးတေးသံဆုနဲ့ တဈနှဈတာအကောငျးဆုံးသီခငျြးဆုတို့ကို ဆှတျခူးရရှိခဲ့ပါတယျ။
Billie Eilish နဲ့ ပတျသကျပွီး နောကျထပျသဘောကစြရာအကောငျးဆုံးအခကျြက သူ့ရဲ့အေးဆေးတညျငွိမျပွီး နာကငျြကွကှေဲနတေယျလို့ ထငျရတဲ့ စှဲမကျဖှယျအသံလေးပဲဖွဈပါတယျ။ Billie Eilish ဟာ စိတျကနျြးမာရေးနဲ့ သကျဆိုငျတဲ့အကွောငျးအရာတှကေို သူ့ရဲ့သီခငျြးစာသားတှမှော အမွဲတမျးနီးပါး ရေးသားဖျောပွလရှေိ့ပါတယျ။ Billie Eilish ရဲ့အသှငျအပွငျ နဲ့ အနုပညာအရညျအခငျြးက အခွားသောအနုပညာရှငျတှနေဲ့ ယှဉျကွညျ့မယျဆိုရငျ ကှဲပွားခွားနားပွီး ဆနျးသဈနတောဟာ Billie ရဲ့ အားသာခကျြပဲလို့ဆိုရပါမယျ။
၂၀၁၉ ခုနှစ်ရဲ့ အကျော်ကြားဆုံးအဆိုတော်။
ဟောလီဝုဒ်အနုပညာလောကထဲကိုရောက်တာမှ သိပ်မကြာသေးပေမယ့် အောင်မြင်မှုတွေ တစ်သီတစ်တန်းကြီး ရရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ် Billie Eilish ဟာ ဟောလီဝုဒ်ဝါရင့်အဆိုတော်တွေရဲ့ အောင်မြင်မှုကို အမှီလိုက်နိုင်လာသူပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် Global Digital Singles Chart ရဲ့ ပထမနေရာမှာ “Bad Guy” သီချင်းနဲ့ Billie Eilish ကဦးဆောင်နေခဲ့ပြီး ဒုတိယနေရာကိုတော့ “Old Town Road” သီချင်းနဲ့ Lil Nas X က ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်သာရှိသေးတဲ့ Billie Eilish ကို ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လေးတွေအပြင် အသက် ၂၀ ကျော်၊ ၃၀ ကျော်တွေကလည်း သဘောကျအားပေးကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဟောလီဝုဒ်အနုပညာအသိုင်းအဝိုင်းက အနုပညာရှင်တစ်ချို့ဟာလည်း Billie Eilish ရဲ့ အမာခံပရိသတ်တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ Billie Eilish လေးကို လူတွေက သဲသဲလှုပ်ချစ်ကြတာက သူ့ရဲ့သီချင်းကြောင့်လား ? ဒါမှမဟုတ် သူ့ရဲ့စတိုင်ကြောင့်လား ? အမှန်တကယ်တော့ ၂ခုလုံးကြောင့်ပါပဲ။
Billie Eilishလေးဟာ စကားကို ပွင့်လင်းစွာပြောတတ်ပြီး ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ သာမန်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် ကောင်မလေးတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Billie လေးရဲ့ ဖက်ရှင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ သူမဟာ သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းအလှကို ဖုံးကွယ်ထားလိုတာကြောင့် အမြဲတမ်း အင်္ကျီပွပွ ဘောင်းဘီပွပွတွေဝတ်ထားတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချက်ကပဲ အခြားအနုပညာရှင်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ ကွာခြားတဲ့အချက်ဖြစ်နေပြီး အင်္ကျီပွပွ၊ ဘောင်းဘီပွပွဝတ်ထားတာတောင်မှ ချစ်စရာကောင်းနေပြန်ပါတယ်။
Billie ရဲ့ သီချင်းအများစုကို နားထောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင် အနည်းငယ် ခြောက်ခြားစရာကောင်းသလို မြူးမြူးကြွကြွ ပုံစံမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်သာရှိသေးတဲ့ Billie Eilish လေးဟာ အခြားသောဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွေ ခံစားရလေ့ရှိတဲ့ မသေချာမရေရာတဲ့ခံစားချက်တွေကို ခံစားရလေ့ရှိကြောင်းကို သူ့ရဲ့သီချင်းတွေကို နားထောင်ကြည့်ရုံနဲ့ တန်းသိနိုင်ပါတယ်။
Billie Eilish ရဲ့ “Bad Guy” သီချင်းဟာ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းက နိုင်ငံ ၁၅ နိုင်ငံရဲ့ ဂီတစာရင်းမှာ လူကြိုက်အများဆုံးသီချင်းအဖြစ် ထိပ်ဆုံးကနေရပ်တည်နေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ၆၂ ကြိမ်မြောက် Grammy ဆုပေးပွဲမှာလည်း Billie Eilish ရဲ့ “Bad Guy” သီချင်းဟာ တစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံးတေးသံဆုနဲ့ တစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံးသီချင်းဆုတို့ကို ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ပါတယ်။
Billie Eilish နဲ့ ပတ်သက်ပြီး နောက်ထပ်သဘောကျစရာအကောင်းဆုံးအချက်က သူ့ရဲ့အေးဆေးတည်ငြိမ်ပြီး နာကျင်ကြေကွဲနေတယ်လို့ ထင်ရတဲ့ စွဲမက်ဖွယ်အသံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Billie Eilish ဟာ စိတ်ကျန်းမာရေးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို သူ့ရဲ့သီချင်းစာသားတွေမှာ အမြဲတမ်းနီးပါး ရေးသားဖော်ပြလေ့ရှိပါတယ်။ Billie Eilish ရဲ့အသွင်အပြင် နဲ့ အနုပညာအရည်အချင်းက အခြားသောအနုပညာရှင်တွေနဲ့ ယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ကွဲပြားခြားနားပြီး ဆန်းသစ်နေတာဟာ Billie ရဲ့ အားသာချက်ပဲလို့ဆိုရပါမယ်။
Previous ၂၀၂၀ ခုနှဈအစောပိုငျးမှာပဲ လူကွိုကျမြားခဲ့တဲ့ သီခငျြး (၈) ပုဒျ။
Next အာရှပစိဖိတျဒသေ အိမျခွံမွစြေေးကှကျနဲ့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈအန်တရာယျ။